Thomas Tuchel oo marmarsiyo u sameeyay bar-bardhicii ay xalay la galeen kooxda Brighton – Gool FM
Thomas Tuchel oo marmarsiyo u sameeyay bar-bardhicii ay xalay la galeen kooxda Brighton
Dajiye April 21, 2021
(Blues) 21 Abriil 2021. Macalinka kooxda kubadda cagta Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa qirtay in waxqabadkii kooxdiisa ay saameyn ku yeelatay dhibaatada haatan jirta ee ku aadan horyaalka cusub ee European Super League.
Kulankii ku dhex maray kooxaha Chelsea iyo Brighton garoonka Stamford Bridge ayaa wuxuu ku dhamaaday bar-bardhac 0-0 ah, kaddib markii uu dib u dhac ku yimid waqtigii loogu tala galay sababtoo ah jamaahiirta Blues ayaa ku soo xoomay banaanka garoonka si ay u muujiyaan daroonkooda ah sida ay kaga soo horjeedaan in kooxdooda ay ka qeyb gasho mashruuca muranka dhaliyay.
Haddaba shabakada “BBC Sport” ayaa soo bandhigtay wareysi uu bixiyay tababaraha kooxda Chelsea ee Thomas Tuchel, kaddib ciyaarta, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan ahaa mid walwallsan, waxaana u maleynayaa in sidoo kale ciyaartoyda ay sidaas ahaayeen, kama aanan hadlin wax aan aheyn European Super League kahor ciyaarta, ma jirin cid wax iga weydiisay kulanka.”
“Waxaan isku daynay inaan abuurno jawi aan ku guuleysan karno kulanka, “Waxaan isku daynay inaan abuurno jawi aan ku guuleysan karno kulanka, laakiin ma aanan guuleysan.”
“Waan niyad jabnay, waxaan dooneynay inaan guuleysano, waana ognahay sida ay guusha muhiim u tahay waqtiyadan, waxaan dooneynay inaan kaalinta 3-aad galno kulankan kaddib.”
“Waxaan nasiib u yeelanay inaanan guuleysan, waxaan sameynay qaladaad badan, waxaana u muuqanay maskax ahaan kuwo daalan, umana qalmin inaan guuleysano.”
Si kastaba ha ahaatee, Kaddib bar-bardhicii ay la gashay Chelsea kooxda Brighton & Hove Albion ayaa ka dhigay in Blues ay kaga jirto booska afaraad jadwalka kala sareynta horyaalka Premier League, waxayna leedahay 55 dhibcood.
Hordhac: Cadiz vs Real Madrid... (Labadaan kooxood oo barbaro goolal la'aan ah soo galay kulammadoodii ugu dambeeyey horyaalka oo caawa isku dheggan)
Jamie Carragher oo qaab jees jees ah kaga hadlay burburka ku yimid horyaalka cusub ee European Super League